ကောင်မလေးအတွက်ပန်းစည်းသွားအပ်ရင်းအကြံတူနေတဲ့ထွန်းထွန်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ထူးအောင် – ShwePyiAye
ထူးအောင်ကတော့ ယောကျ်ားပီသတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တည်ကြည်ရင့်ကျက်တဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်ကြားမှာ ရေပန်းစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်မဖြစ်ခင်က Gym Trainer တစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေတစ်ဖက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Gym တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်။ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ထူးအောင်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာတွဲနေတဲ့ချစ်သူမရှိသေးပေမယ့်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ချစ်သူများနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတယ်ဗျ.. သေချာစနစ်တကျကို ပြင်ဆင်ပြီးပေးတယ်… ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လေးနှစ်လောက်တုန်းက ကောင်မလေးရှိတယ်ဗျ.. အဲ့တုန်းကကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့သေချာပြင်ဆင်တာပေါ့နော်.. ဆိုင်မှာ သွားပြီးတော့ သေချာအပ်တာ .. ဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ ကိုထွန်းထွန်းနဲ့တွေ့ပါတယ်.. အဲ့ဒါကတော့ အမှတ်တရပါ… သူကလည်း တကူးတကခိုးပြီးလာလုပ်တာ.. ကျွန်တော်ကလည်း ခိုးပြီးလာလုပ်တာ.. ဟိုရောက်တော့မှ တွေ့ကြတာပေါ့နော်..လက်ဆောင်ပေးတာကြတော့ သူက ပန်းစည်းနဲ့အရုပ်နဲ့ပေးတာလားမသိဘူး.. အဲ့တော့ သူပေးတဲ့ပန်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ပန်းစည်းက တူနေတယ်.. အဲ့တာတော့အမှတ်တရပါ” ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအ့ပြင် ထူးအောင်ကတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာလက်ဆောင်မှ မရဖူးသေးတာကြောင့် နောက်သူနဲ့တွေ့လာမယ့် ချစ်သူလေးကြရင်တော့ ပေးပါလို့လည်း ဈေးဗန်းခင်းလိုက်ပါသေးတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးရေ ထူးအောင်ကတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထွန်းထွန်းနဲ့ တွေ့ခဲ့ကြတဲ့အမှတ်တရလေးကို ဖြေကြားထားတဲ့ဗွီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးရော ချစ်သူများနေ့မှာ ထူးထူးခြားခြားအမှတ်တရတွေ ရှိခဲ့ဖူးလား ဖြေပေးခဲ့ပါဦးနော်….
ထူးေအာင္ကေတာ့ ေယာက်္ားပီသတဲ့ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ တည္ၾကည္ရင့္က်က္တဲ့႐ုပ္ရည္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ မိန္းကေလးပရိသတ္ၾကားမွာ ေရပန္းစားေနသူတစ္ေယာက္ပါ။သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္မျဖစ္ခင္က Gym Trainer တစ္ေယာက္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း အႏုပညာအလုပ္ေတြတစ္ဖက္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ Gym တစ္ခုကိုလည္းဖြင့္လွစ္ထားပါေသးတယ္။ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ေနတဲ့ ထူးေအာင္ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာတြဲေနတဲ့ခ်စ္သူမရွိေသးေပမယ့္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက ခ်စ္သူမ်ားေနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေလးေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ “ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြေပးတယ္ဗ်.. ေသခ်ာစနစ္တက်ကို ျပင္ဆင္ၿပီးေပးတယ္… ကြၽန္ေတာ္လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေလးႏွစ္ေလာက္တုန္းက ေကာင္မေလးရွိတယ္ဗ်.. အဲ့တုန္းကေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို လက္ေဆာင္ေပးခ်င္လို႔ေသခ်ာျပင္ဆင္တာေပါ့ေနာ္.. ဆိုင္မွာ သြားၿပီးေတာ့ ေသခ်ာအပ္တာ .. ဘယ္သူနဲ႔ေတြ႕လဲဆိုေတာ့ ကိုထြန္းထြန္းနဲ႔ေတြ႕ပါတယ္.. အဲ့ဒါကေတာ့ အမွတ္တရပါ… သူကလည္း တကူးတကခိုးၿပီးလာလုပ္တာ.. ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ခိုးၿပီးလာလုပ္တာ.. ဟိုေရာက္ေတာ့မွ ေတြ႕ၾကတာေပါ့ေနာ္..လက္ေဆာင္ေပးတာၾကေတာ့ သူက ပန္းစည္းနဲ႔အ႐ုပ္နဲ႔ေပးတာလားမသိဘူး.. အဲ့ေတာ့ သူေပးတဲ့ပန္းစည္းနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ေပးတဲ့ပန္းစည္းက တူေနတယ္.. အဲ့တာေတာ့အမွတ္တရပါ” ဆိုၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒါအ့ျပင္ ထူးေအာင္ကေတာ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ထူးထူးဆန္းဆန္းဘာလက္ေဆာင္မွ မရဖူးေသးတာေၾကာင့္ ေနာက္သူနဲ႔ေတြ႕လာမယ့္ ခ်စ္သူေလးၾကရင္ေတာ့ ေပးပါလို႔လည္း ေဈးဗန္းခင္းလိုက္ပါေသးတယ္ေနာ္။ပရိသတ္ႀကီးေရ ထူးေအာင္ကေတာ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ထြန္းထြန္းနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ၾကတဲ့အမွတ္တရေလးကို ေျဖၾကားထားတဲ့ဗြီဒီယိုေလးကို ပရိသတ္ႀကီးၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ပရိသတ္ႀကီးေရာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ထူးထူးျခားျခားအမွတ္တရေတြ ရွိခဲ့ဖူးလား ေျဖေပးခဲ့ပါဦးေနာ္….
Previous post နေ့ညမပြတ်အလှူကိစ္စတွေနဲ့ လုံးပန်းနေရပြီးနောက်နေမကောင်းလို့ဆေးခန်းရောက်နေတဲ့ စမိုင်းလ်
Next post နန်းသူဇာနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီလို့ပရိသတ်တွေကိုထုတ်ပြောလာတဲ့ကျော်ထွဋ်ဆွေ